Fiberglass harato, Fiberglass kofehy fanjairana, Fiberglass Window Screen - Huili
Tape Fiberglass fametahana tena
Efijery varavarankely tsy misy fangarony
Wuqiang County Huili fiberglass Co. Ltd, dia naorina teo an 2008, ary hita ao wuqiang County, hengshui, Hebei Shina. Ny lehibe indrindra famokarana fototry ny varavarankelin'ny fiberglass screen.With taona ny fampandrosoana, dia lasa Integrated orinasa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, varotra, fanondranana entana sy fiaraha-miasa. Amin'ny lamba lehibe iray nandinika milina, mamolavola milina sy ny mandroso famokarana fitaovana salantsalany.
Fiberglass Fly efijery dia tenona avy pvc mifono kofehy tokana. Ny lamba bibikely Fiberglass dia manome fitaovana mety amin'ny tranobe indostrialy sy fambolena mba hialana amin'ny lalitra, moka ary bibikely kely na ho an'ny rivotra. Ny karazan-efijery fahita mahazatra indrindra dia vita amin'ny efijery bibikely ma ...
Efijery bibikely tsy fahita firy
Sarin-bibikely tsy fahita firy-fibra-fibra-fibra-vera natao hanoherana lalitra kely sy mosquito, misy ny vokatry ny No-see. Antsoina koa izy hoe Invisible Insect Screen na Invisible Window Screen. Ity efijery bibikely tsy fahita-um ity dia loko arina avokoa. Ny aloka maizina ...